မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှာ vzo,gtalk,skype အင်တာနက်ဖုန်းများ ပြောခွင့်ကို ပိတ်ပင်- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှာ vzo,gtalk,skype အင်တာနက်ဖုန်းများ ပြောခွင့်ကို ပိတ်ပင်
ကျွန်တော့်အနေနဲ ့အကြံပေးချင်တာက အဲဒါကြီးကို ဘယ်သူမှ မလိုက်နာဖို ့ဘဲ၊ ဟိုလူက ကြောက် ၊ ဒီလူက ကြောက်၊ ဟိုဆိုင်က သုံးရဲ ့လား၊ ဒီဆိုင်က ခေါ်ပေးရဲ ့လား အခြေအနေကြည့်မနေဘဲ ၊ အားလုံးနောက်မဆုတ်ဖို ့လိုပါတယ်၊ အားလုံးက သာ နောက်ဆုတ်နေရင် သူတို ့အကြိုက်ဖြစ်သွားမှာပါ၊ ဒီလိုသာဖြစ်သွားရင် ဘယ်သူက ဘယ်အချိန်ပြန်စ မှာလဲ၊ အဲဒီချိန်ကျမှ ဘယ်သူမှပြန်စ မယ်မထင်ဘူး၊ အဲဒါနဲ ့ဘဲ voip ကို အပြီးအပိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ရမယ်
အမှန်အကန်ပါပဲ..ဟိုလူကြောက် ဒီလူကြောက်ဆိုရင်တော့..သူတိုအကြိုက်ပဲလေ..ကပ်တွတ်တာတော့ဟုတ်ဘူးနော် ဆိုင်တွေကို ကြည်ပဲလား အိမ်တွေမှာသုံးတဲသူကျတော့ သူတို့ဘယ်လိုစီစဉ်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ တန်းတူညီတူဖြစ်သင့်တာ ပေါ့ ဒါသတ်သတ် ဆိုင်တွေကို တိုက်ခိုက်တာ ငြိမ်ခံနေရင်တော့ ..
ပာုတ်တယ်ဗျိ ု.နောက်မဆုတ်ဘဲကိုယ်.ဘာသာကိုလုပ်စရာရှိတာသာဆက်လုပ်၊ နောက်ပြီး Internet ပေါ ်မှာသာအဲ.ဒီ Scan တွေကပျံ.နေတာပါဗျာ တကယ်တမ်းတရား၀င်အကြောင်းကြားစာတော.ရောက်မလာသေးပါဘူး။
ကျွန်တော်ထင်တာတော.ဒါသူ.တို.သွေးတိုးစမ်းတာပဲ၊နောက်ပြီးအဲဒီ Case အတွက် P.A.C တွေစည်းလုံးဖို.လိုလိမ်.မယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို.ဒီလိုလုပ်ကြည်.ရင်မကောင်းဘူးလား၊
P.A.C တွေစုပြီး Seminar လေးလုပ်ကြည်.ရင်ကောင်းမလားလို. ၊ နေရာနဲ.အချိန်ကိုတော.ဒီပေါ ်မှာပဲညှိကြမယ်လေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Sunday လိုနေ.မှာမလုပ်ဘဲ ၊ Monday လိုနေ.မှာလုပ်စေချင်တယ်။
အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို. အဲ.ဒါနဲ.ပတ်သတ်ပြီးတစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ.အမြင်တွေလည်းသိရမယ် ၊ နောက်ပြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာလဲတိုင်ပင်ကြတာပေါ.၊ မကောင်းဘူးလား ??
ပာုတ်ပြီ၊ အဲဒီ.ပာာကို ဒီပေါ ်ကို Scan ဖတ်ပြီးတင်ပေးဗျာ၊ကြည်.ရတာပေါ.။
အကြောင်းကြားစာက ရောက်လာပါပြီဗျာ။ ဆိုင် ပေါက်ဝမှာ လာကို ကပ်သွားပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ တွေ့နေတဲ့ online ပေါ်က scan အတိုင်းပါပဲ တင့်လွင် လက်မှတ်နဲ့ တစ်စောင် စိန်ဝင်း လက်မှတ်နဲ့တစ်စောင်
(ဦး)တင်.လွင် လက်မှတ်နဲ.ပာာကိုသေချာဖတ်ကြည်.တော.နံပါတ်(၃)မှာဒီလိုရေးထားတာတွေ.တယ်ဗျ၊ "Internet ပေါ ်မှ VoIp ခေါ ်ဆိုမှုများသည်လက်ရှိအခြေအနေတွင်တရား၀င်ခွင်.ပြ ုထားခြင်းမရှိသေးသည်.အတွက်...."လို.ပါတယ်ဗျ။
ကြည်.ရတာစျေးခေါ ်နေသလိုပဲ (ရိုင်းတယ်ထင်ပါကမော်မော်၊မင်မင်တွေဖျက်နိုင်ပါသည်။)သေချာပါတယ်သူတို.တွေ VoIp အတွက်နောက်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာသက်သက်လိုင်စင်လျှေက်ထားခိုင်းပါလိမ်.မယ်။(စျေးခပ်ကြီးကြီးနဲ.ပေါ.)။
အခုနောက်ပိုင်း PAC လိုင်စင်တွေကို Myanmar Info Tech က မကိုင်တော.ဘူးလို.ကြားပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးကပဲကိုင်မယ်လို.ပြောပါတယ်။ အခြေနေကိုတော. နဲနဲ စောင့်ကြည်.ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အခု လိုင်စင်သက်တမ်းသွားတိုးတဲ.အသိတွေပြောတာက Info Tech က March လနောက်ပိုင်းကြိုဆောင်ထားတဲငွေတွေကိုပြန်ပေးတယ်လို.လဲကြားပါတယ်။ ကြွေးကျန်ရှိရင်တော. ဆောင်ရပါတယ်။ April လလောက်ဆိုတစ်ခုခု သိရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရာထူးမှအားမနာ.....အရှက်မရှိ....ပညာကောတက်ရဲ့လားဟင်.?
yeathant wrote: »
Those are the exact same people for at least next5years everybody!
He is younger brother of Doctor Khin Maung Win. (liver).